Alexandre de Juniac: Fotodrafitrasa, vola lany amin'ny fampiasana herin'ny fiaramanidina any Amerika Latina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Alexandre de Juniac: Fotodrafitrasa, vola lany amin'ny fampiasana herin'ny fiaramanidina any Amerika Latina
Aprily 4, 2018
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia niantso ny governemanta Amerika Latina sy Karaiba hifantoka amin'ny fotodrafitrasa, ny vidiny ary ny rafitra mifehy ny faritra. Amin'ny fifantohana amin'ireo faritra ireo, ny tombony ara-toekarena sy ara-tsosialin'ny fiaramanidina dia azo hamarinina mandritra ny fotoana itadiavana ny fifandraisan'ny rivotra any amin'ny faritra.
Ny sidina dia efa mitana andraikitra lehibe amin'ny toekarem-paritra, mampiasa olona dimy tapitrisa eo ho eo ary manohana $ 170 miliara amin'ny harinkarena faobe.
“Mila fotodrafitrasa mahomby isika handraisana ny fitomboana; vidiny mirary sy haba tsy mamono azy; ary rafitra maoderina mifehy izay manohana azy, ”hoy i Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy CEO an'ny IATA nandritra ny lahateniny nandritra ny fihaonamben'ny Wings of Change - Chile tany Santiago.
“Ny fangatahana fitsangatsanganana an'habakabaka dia mihoatra ny fitomboan'ny fahaizan'ny seranam-piaramanidina sy ny fanavaozana ny rafi-pitantanana fifamoivoizana amin'ny rivotra. Tao anatin'ny folo taona lasa, ny isan'ny mpandeha notaterin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka faritra dia nihoatra ny avo roa heny. Ary amin'ny 2036, manantena izahay fa mihoatra ny 750 tapitrisa ny dia hikasika ilay faritra. Raha tsy misy hetsika fiaraha-miasa anio dia hiroso amin'ny krizy isika, "hoy i de Juniac.
IATA dia niantso ny governemanta any amin'ny faritra hiara-hiasa amin'ny indostria hamolavola paikady maharitra izay hiantohana ny fahaiza-manao sahaza, ny vidiny mirary ary ny serivisy amin'ny serivisy ary mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa.
Ny fanamby lehibe ataon'ny faritra dia Buenos Aires, Bogota, Lima, Mexico City, Havana ary Santiago. “Raha tsy miresaka izy ireo dia hijaly ny toekarena amerikanina latina. Raha tsy afaka miantsona ny fiaramanidina dia hisidina any amin'ny toeran-kafa ny tombontsoa ara-toekarena entin'izy ireo, "hoy i de Juniac. Nasongadiny ho zava-dehibe indrindra ny tanànan'i Mexico sy Santiago:
• Ny tanànan'i Mexico no be mpitsikera indrindra amin'ny siny hoditra. Ny seranam-piaramanidina ankehitriny dia natokana ho an'ny mpandeha 32 tapitrisa isan-taona nefa 47 tapitrisa no isan'izy ireo. “Ny vahaolana dia seranam-piaramanidina vaovao izay efa an-dàlam-panamboarana. Saingy ny hoaviny dia natao politika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ankehitriny. Ny filana lehibe amin'ny seranam-piaramanidina vaovao dia mila mahatakatra ny rehetra, "hoy i de Juniac.
• Any Santiago dia apetraka ny fahafaha-manaon'ny seranam-piaramanidina ilaina indrindra saingy tsy ampy ny mangarahara, mijaly ny haavon'ny serivisy ary mihabe ny vidin'ny mpampiasa. Mandrahona ny hampiakatra ny fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ny governemanta, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny mpiara-miombon'antoka hafa izay nanampy tamin'ny famoronana foibe fitaterana an-habakabaka nandroso indrindra teto amin'ny faritra sy ny indostrian'ny fizahantany.
“Toerana fanaovana varotra i Amerika Latina sy Karaiba. Ny hetra, ny sarany ary ny politikan'ny governemanta dia miteraka enta-mavesatra lehibe. Ankehitriny dia heverin'ny governemanta ho loharanom-bola ny sidina. Saingy mahery vaika kokoa izy io amin'ny fampidinana vola miditra. Ny fampihenana ny vidin'ny asa aman-draharaha dia handoa dividends ara-toekarena sy sosialy lehibe, "hoy i de Juniac.
IATA dia nanonona faritra maro izay mavesatra sy mifanohitra amin'ny famokarana ny vesatry ny politikan'ny governemanta sy ny hetra:
• Ny politikan'ny vidin'ny solika any Brezila dia manampy $ 800 tapitrisa isan-taona.
• Ekoatera sy Kolombia dia mijaly noho ny vidiny mihoapampana takin'ny mpamatsy solika tokana - vao mainka niharatsy izany tao Ekoatora izay misy hetra solika 5% ihany koa.
• Manana hetra amin'ny fifandraisana i Kolombia, hetra mivoaka ary ankehitriny ny ben'ny tanàna dia mikasa ny handoa hetra $ 5.00 ho an'ireo mpandeha an'habakabaka hanampiana ireo fotodrafitrasa amin'ny arabe.
• Arzantina dia manana saran'ny mpandeha be miharatsy noho ny vidin'ny ampihimamba sy ny asa ratsy ataon'ny orinasa mpitantana ny tany tokana.
• Any St. Lucia, ny hetra sy ny sarany (ao anatin'izany ny frais amin'ny fampandrosoana any amin'ny seranam-piaramanidina) dia miakatra mba hanamboarana ny arabe sy hanamboarana tobin'ny sambo fitsangantsanganana.
• Mandoa vola ny hetra fizahan-tany manerana ny faritra (Mexico, Kolombia, Ekoatera, Peroa, Nikaragoà, Jamaika ary Costa Rica ary St. Lucia), manakana ireo mpizahatany izay mitaky vidiny lafo kokoa.
Rafitra mifehy maoderina
Nangataka ihany koa ny IATA ho an'ny governemanta manerana ny faritra mba hamolavola rafitra rafitra maoderina mifantoka amin'ny firindrana sy ny fanekena ny fenitra. Raha mpisava lalana amin'ny fivoaran'ny marika trans-nasional ny faritra, ny lalàna mifehy ny firenena dia mametra ny tombom-barotra azo trandrahana. Ohatra, ny ekipazy ara-teknika sy ny fiaramanidina dia tsy azo ampiasaina mora foana hahomby indrindra satria ny politika fiarovana dia tsy manaiky ny fenitra iraisana manerana ny faritra.
“Ny fiarovana no laharam-pahamehantsika. Saingy tsy azo hatsaraina ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny dingana mavesatra. Raha voamarina amin'ny fenitra eken'ny besinimaro ekipazy ny ekipa mpiasan'ny seranam-piaramanidina, misy antony azo antoka ve ny mandrara azy ireo tsy hiasa an-trano amin'ny làlana any Argentina? Sa ny mifamadika amin'izany? Ary raha misy mari-pahaizana voamarina any Brezila amin'ny fenitra iraisan'ny besinimaro, nahoana no mila misoratra anarana indray any Chili izy hiasa? ” hoy i de Juniac.
IATA dia niantso ny fifanakalozan-kevitra feno eo amin'ny governemanta sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao amin'ny faritra mba hijerena ireo fahombiazana azo avy amin'ny fanekena ny fenitra iraisana.
“Ny sidina fiaramanidina dia efa miteraka tombontsoa lehibe any Amerika Latina sy Karaiba. Maherin'ny ampahefatry ny olona iray tapitrisa no mivezivezy mankany, avy na ao amin'ny faritra ary ny fitaterana an'habakabaka dia miteraka $ 170 miliara dolara amin'ny harinkarena faobe. Saingy mba hahitan'ny sidina fiaramanidina ny fangatahan'ny mpandeha ho avy ary hanome ny tombony ara-toekarena sy sosialy izay tena hainy, ny governemanta dia mila miara-miasa amin'ny indostria mba hahazoana antoka fa tanteraka izy ireo, "hoy i de Juniac.
Priceline dia manitatra ny teknolojia, ny fiaraha-miasa amin'ny atiny miaraka amin'ny Travelport
Ny Delta Air Lines sy ny Korean Air dia hanomboka ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miombon'antoka iraisam-pirenena